Faah-faahin Weerarkii Degmada Xamar-weyne | Sagal Radio Services
Koox Hubeeysan oo watay Gaari Kaarib ay ayaa Rasaas ku furay Gaari kale oo ahaa Suuzuki islamarkaana ay la socdeen ilaa Afar Qof oo Saddex kamid ah ay Goobta ku Geeriyoodeen halka kan kale uu Dhaawac soo gaaray.
Wararka ayaa sheegaya in dadka Geeriyooday uu ku jiro Xuildhibaan Hore oo ka tirsanaa Baarlamaankii KMG oo Magacsiisa lagu sheegay Liibaan C/llaahi.
Gaariga Weerarka geeystay ayaa Durbadiiba ka baxsaday goobta,iyadoona ay soo gaareen isla goobta Ciidamada Amaanka Falka kadib,iyadoo Warar kalena ay sheegayan in uu dhaawac soo gaaray Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo Magaciis lagu sheegay Mayow inkastoo aan wali wadno Xaqiijinta Warkaas.
Ma jirto Cid sheegatay Mas’uuliyada Weerarka lagu dilay Saddexda Ruux ee ka dhacay Degmada Xamar-weyne ee Gobolka Banaadir.
Hasse ahaatee ma ahan mid Cusub in Koox Hubeeysan oo Gaari wata ay Dilaan Mas’uliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya,waxaana sidaan oo kale Weeraro Qorsheysan loogu dilay Alle ha u naxariistee Xildhibaan Saado Cali Warsame iyo Xildhiban Xayd oo dhamaan Muqdisho lagu dilay.